Inona marina no atao hoe : zaza voaloboka ?
Tranga mety hiseho amin’ny vohoka rehetra ny zaza voaloboka. Tsy fahalavorarian’ny tarazo no mahatonga azy, amin’ny ankapobeny.
Mila mitandrina manokana ireo vehivavy efa tratran’ity vohoka tsy ara-dalàna ity, satria tokony ho afaka 2 na 3 taona ao mitoe-jaza indray, raha tsy izany dia ahiana hiverina foana ilay zaza voaloboka.
Tsy fahalavorarin’ny tarazo
Raha hazavaina tsotsotra dia tsy fahalavorarian’ny vohoka no antsoina hoe : zaza voaloboka. Vokatry ny olana eo anivon’ny fitambaran’ny tarazo, na ilay antsoina hoe « chromosome 23 », amin’ny tsirinaina lahy sy ny atodinaina no mahatonga azy io. Mety hiseho koa ny hoe : ara-dalàna ny “chromosome 23” amin’ilay vehivavy, fa ny an’ilay lehilahy kosa no lasa avo 2 heny na koa avo 3 heny.
Misy karazany 2
Misy karazany 2 ny zaza voaloboka dia ny zaza voaloboka feno sy ny zaza voaloboka ampahany :
· Zaza voaloboka tena feno : Tsy misy ahitra, tsy misy zaza ao anaty tranon-jazan’ilay vehivavy, fa bolongan-javatra misy voany maromaro mitambatra sy fotsifotsy. Vokatry ny fitambaran’ny atodinaina tsy misy « chromosome » sy ny tsirinaina lahy mitondra « chromosome » avo 2 heny noho ny ara-dalàna izy ity.
· Zaza voaloboka amin’ny ampahany : Ara-dalàna tanteraka indray ny « chromosome » amin’ny atodinaina, saingy be loatra kosa izany ao amin’ny tsirinaina lahy. Misy ahitra ny vohoka, misy zaza, saingy tsy ara-dalàna sy tsy mivoatra ara-dalàna ilay zaza. Mety tsy mitombo tampoka izany no sady mivadika ho bolongan-javatra iray.
Ahoana no hamantarana fa zaza voaloboka ilay vohoka ?
Toy ny vohoka rehetra ihany dia miseho amin’ny vehivavy ireo fambara fa bevohoka izy : loiloy, fanina, miato ny fadimbolana, be torimaso, kamokamo sns. Rehefa atao ny fitiliana ny vohoka amin’ny “test de grossesse” dia “positif” foana. Raha tsy manao “echographie” mihitsy izy dia misy rà mandeha tampoka any amin’ny faha-3 na faha-4 volan’ny vohokany. Mivoaka miaraka amin’io rà io ny karazana bolongan-javatra kely, toy ireny voanjobory ireny. Manaraka izany dia mibontsina ny kibony ary mihena tampoka.
Iza no tena ahiana hanao zaza voaloboka ?
Amin’ny ankapobeny dia ny vehivavy be taona, mihoatra ny 40 taona, sy ireo vehivavy efa nitondra zaza voaloboka no ahiana hitrangan’izany zaza voaloboka izany. Mila mitandrina ihany koa ireo vehivavy efa afa-jaza ho azy teo aloha ary ireo vehivavy taizan’aretina vokatry ny tsy fahampiana vitamina A.
Ny atao ?
Rehefa voamarina tamin’ny alalan’ny “echographie” fa zaza voaloboka ilay vohoka dia tokony mankany amin’ny dokotera avy hatrany. Diovina ny tranon-jaza, tsaboina manokana, raha toa ka mivoaka ivelan’ny tranon-jaza ilay zaza vaoloboka. Ankoatra izay dia tsy tokony hiteraka mandritra ny 2 na 3 taona ilay vehivavy, satria mety hiverina indray ilay zaza voaloboka, raha akaiky loatra ny fotoana hametrahana zaza.
Clinique et Echographie Fidy Ambatomainty